Prof. U Ko Ko – စာမကျြနှာ5– Healthy Life Journal
—————-၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊—————– Q. ဘယ်လောက်အိပ်ရင် လုံလောက်ပါသလဲ ဆရာ။ DawMay(FB) A. အထက်တန်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအများစုဟာ တစ်ညအိပ်ချိန် ၈-၉ နာရီ လိုအပ်ပါတယ်။ အသက် ၁-၅ နှစ်အတွင်း ကလေးတွေက...
အားဆေးကို ဘယ်သူတွေ သောက်သင့်တာလဲ . .
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. အခုခေတ်မှာ ဗီတာမင်နဲ့ အားဆေးတွေကို လူအတော်များများ မှီဝဲနေကြပါတယ်။ တကယ်လိုအပ်ပါသလား။ ဘယ်သူတွေက ဗီတာမင်အားဆေးတွေ မှီဝဲသင့်ပါသလဲ။ Sandar(FB) A. ဗီတာမင်နဲ့ အားဆေးကို လိုအပ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ သူတွေကို သိစေချင်ပါတယ်။...
ရိုးရိုးရေနွေးကြမ်းနဲ့ Green Tea ဘာကွာသလဲ
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ရိုးရိုးရေနွေးကြမ်းနဲ့ Green Tea ဘာကွာခြားမှု ရှိပါသလဲ။ နွယ်နွယ် (FB) A. ရိုးရိုးလက်ဖက်ရည်ကြမ်းနဲ့ Green Tea ဘာကွာသလဲဆိုရင် Green Tea တို့ ဂျင်ဆင်းတို့ထဲမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်တွေ...
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. တချို့လူတွေက မကြာခဏ အုန်းလွဲတတ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့် မကြာခဏ ဖြစ်ရတာပါလဲ ဆရာ။ A. Cervical Spondylosis ဆိုတဲ့ လည်ပင်းအကြောညပ်တာကို အရပ်ထဲမှာ အုန်းလွဲတယ်လို့ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ တစ်မျိုးက...
အားနည်းတိုင်း အားဆေးသောက်သင့်ပါသလား . .
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ကျွန်မအသက် ၅၀ ကျော်ပါပြီ။ အသက် ၅၀ ကျော်ရင် အားဆေးသောက်ဖို့ လိုပါသလား။ အားနည်းတိုင်း အားဆေးသောက်သင့်ပါသလား ဆရာ။ DK (FB) A. အားနည်းတယ်ဆိုတာလည်း မျိုးစုံရှိပါတယ်။...
အ၀လွန်တာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ရပ်လို့ ဆိုနိုင်သလား
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. အ၀လွန်တာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါသလား ဆရာ။ TT(FB) A. ၀တဲ့သူနဲ့ ပိန်တဲ့သူတွေကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ၀တဲ့သူတွေက ရောဂါဖြစ်နှုန်း ပိုများတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ၀ရင်...
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. ရာသီဥတုအကူးအပြောင်းတွေမှာ ဆီးချိုရှိသူတွေအနေနဲ့ အအေးမိ၊ တုပ်ကွေးနဲ့ နာမကျန်းမှုတွေ မဖြစ်လွယ်အောင် ဘယ်လိုဂရုစိုက် နေထိုင်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ဆီးချိုသမားတိုင်း၊ အထူးသဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အို ဆီးချိုသမားတွေက နဂိုကတည်းက ကိုယ်ခံအားနည်းကြတယ်။...
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ကျန်းမာရေးကတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားဆေးသောက်ချင်လို့ပါ။ ကျန်းမာတဲ့ လူတွေအနေနဲ့ အားဆေးသောက်ဖို့ လိုအပ်ပါသလား ဆရာ။ A. အားဆေးသောက်ဖုိ့ လိုသလားလို့မေးလာရင် တကယ်လို့ အစားအစာကို ညီမျှအောင် စားသောက်နေရင်...